Alahady – 30/11/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)
Inay Ianao mandrovitra ny lanitra dia midina.
Ianao, ry Tompo, no Rainay, Mpanavotra anay no Anaranao, hatrizay ela izay. Nahoana izahay, ry Tompo ô, no dia ataonao maniasia lavitra ny lalanao, ka hamafisinao fo, tsy hatahotra Anao. Miverena, noho ny fitiavanao ny mpanomponao sy ny foko lovanao ! Inay Ianao mandrovitra ny lanitra, dia midina, dia hihorohoro eo anoloanao ny tendrombohitra ! Endrey raha midina Ianao dia hihozongozona eo anoloanao ny tendrombohitra ! Tsy mbola nisy nandre, tsy nisy maso nahita izay andriamanitra hafa, manao toy izany, ho an’ny manantena azy, afa-tsy Ianao, Ianao no mitsena izay manaraka ny rariny an-kafaliana, izay mizotra ny lalanao sady mahatsiaro Anao, Fa izao tezitra Ianao, ary meloka izahay; – sady efa ela no toy izany -: hovonjena va izahay ? Izahay rehetra dia efa tahaka ny olona maloto; ary ny fahamarinana rehetra, toy ny akanjo maloto. Malazo toy ny ravina avokoa izahay, ary ny helokay mipaoka anay toy ny rivotra. Tsy nisy olona niantso ny Anaranao, nifoha mba hifikitra aminao, Fa nafeninao taminay ny Tavanao, ary navelanao ho levona ao anatin’ny fahotanay izahay. Fa ankehitriny, ry Tompo ô, Rainay Ianao ; ary Ianao no Ilay nanefy anay ; tanimanga izahay, ary Ianao no Ilay nanefy anay; asan-tananao avokoa izahay rehetra.
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1Kôr 1, 3-9)
Ry kristianina havana, homba anareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy i Jesoa Kristy Tompo. Isaorako an’Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, noho ny fahasoavan’Andriamanitra nomena anareo ao amin’I Jesoa Kristy : fa noho ny firaisanareo aminy, tonga manan-karena amin’ny zavatra rehetra ianareo dia amin’ny teny rehetra sy amin’ny fahalalana rehetra; ary noho ny niorenan’ny Evanjelin’i Kristy eo aminareo, dia tsy ho latsa-danja noho ny hafa ianareo amin’ny fahasoavana rehetra, hany ka miandry amim-pitokiana ny fisehoan’i Jesoa Kristy Tompontsika. Izy ihany koa no hampiorina anareo hatramin’ny farany mba tsy hanan-tsiny ianareo amin’ny andron’I Jesoa Kristy Tompontsika. Eny, mahatoky Andriamanitra izay niantso anareo hiray amin’ny Zanany, dia I Jesoa Kristy Tompontsika.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 13, 33-37)
Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe: “Mitandrema, miambena, ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiavian’ny fotoana : tahaka ny lehilahy iray nandeha hivahiny, ka nandao ny tranony, ary nanome fahefana ny mpanompony sy nanolo-draharaha hataony avy, dia nandidy ny mpiandry varavarana hiambina. Koa miambena àry, fa tsy fantatrareo izay hahatongavan’ny tompon-trano, na ho hariva, na ho misasakalina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fandrao tonga tampoka izy ka tratrany matory ianareo. Ary izao lazaiko aminareo izao, dia lazaiko amin’ny olona rehetra koa:Miambena”